Free Download Paragon NTFS u Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Paragon NTFS u Mac
Paragon NTFS waa darawalka NTFS ee loogu talagalay Mac OS X, bixinta buuxa helaan Akhri / qortaa in NTFS sida ugu dhakhsaha badan HFS hooyo + files. Waxaa inta badan ay taageerayaan nooc ka mid ah technology Driver File System Universal magacaabay (UFSD). Darawal NTFS ah, Paragon NTFS u Mac OS X heli karaa in badan oo ka mid ah hababka file, sida NTFS, baruurta, Ext2 / 3FS, hoos dhufto ee kala duwan marka nidaamka faylka xaddidan yihiin.
Loo isticmaalaa sidii darawalka NTFS
Paragon NTFS u Mac OS X kaa caawin karaan inaad ku qor oo akhri NTFS formatted flash drives xawaare aad u dheer oo si fudud.
Oo ay taageerayaan UFSD
Sida technology kaliya, UFSD dhiibno u Paragon NTFS. Iyadoo UFSD, Paragon NTFS waxaa uu u suuragelinayaa user ay u shaqeeyaan ka badan warbaahinta nidaamka file.
Nidaamyada files Multiple heli karaa
Nidaamyada file si fiican u yaqaan oo badan ayaa si fiican u la Paragon NTFS, sida NTFS, baruurta, Ext2 / 3FS iyo wixii la shaqayn karaan, taas oo si sahlan loo isticmaali by bilowga ah iyo noqdo oo caan ah.
Paragon NTFS si fiican u shaqeeya darawalka Mac OS X hoos taageerada Darawalka Universal File System (UFSD). UFSD yahay technology cusub oo kaliya ee ay Software Paragon ee Group.
Sida aad ogtahay, waxaa jira wax badan oo ka mid ah hababka file si fiican u jecel yahay, sida NTFS, baruurta, Ext2 / 3FS iyo kuwa kale, ku shaqaynaya kumanaan dhufto ee sida DOS, Windows, Linux iyo Mac iyo wixii la mid ah. Mararka qaar, waa yara adag tahay dadka isticmaala si ay u helaan nidaam file ah. Markaas cilmi abuuro technology UFSD. Ujeedada UFSD waa in la helo hab lagu heli inay tiro badan oo ka mid ah faylasha nidaamka si fiican u yaqaan hoos dhufto ee kala duwan marka aad si ay u helaan hababka files ku fashilmaan. Sidoo kale waxay muujinaysaa dadka isticmaala ee horumarinta Paragon Technology.
Files warbaahinta ama dukumentiyada in Mac malaha ka yimid HFS ee Mac ee + mugga formatted ama ka File System NT Window ee. Laakiin iyadoo aan loo eegayn oo nidaam aad leedahay, habka waa in ay gaaraan heer sare ah marka ay u shaqayso.
Sida loo Undelete NTFS Files ka dib markii takhalusid Waxaa